Vagadziri vePUBG vanomhan'arira Apple neGoogle nekusabvisa Mahara Moto kubva muzvitoro zvavo | Nhau dze iPhone
PUBG yaive yekutanga hondo royale zita iro yakakurumbira rudzi urwu pasi rose, kunyangwe H1Z1 yaive yekutanga kuishandisa. Kubva ipapo, mimwe mitambo yakawanda yakatevera yakadai seFortnite, Apex, Call of Duty: Warzone...
PUBG kuvandudza Krafton Inc kubva kuSouth Korea uye PUBG Santa Monica vakaisa a Chichemo pamusoro peApple neGoogle nekuregeredza nemaune ma clones anowanikwa muzvitoro zvese zviri zviviri, ari Mahara Moto, kubva kumugadziri Garena Online, paari mhosva iyi.
Sezvinogona kuverengerwa mudare, Krafton Inc haingodi kuti mutambo wacho ubviswe kubva kuApple neGoogle zvitoro, asi zvakare, zvinoda muripo wemari. Vanokumbirawo kuti, pamusoro pekubvisa zita reMahara Moto, imwe vhezheni yemutambo ine zita rekuti Mahara Moto Max zvakare ibviswe.
Reuters inotaura kuti Yemahara Moto inoshandisa akati wandei copyrighted zvinhu zvePUBGsenge chimiro chemutambo, zvinhu, midziyo, nenzvimbo.
Mumhosva imwechete, uye inobata Google, zvinodawo kuti vave yakabviswa paYouTube mavhidhiyo ese ezita iri pamwe chete nehupenyu hwekuita dramatizations zvinoenderana nemutambo.
Krafton nePUBG vanoti mazana emamiriyoni emakopi eFree Fire akagoverwa kuburikidza neApp Store neGoogle Play, izvo zvakadhurira Garena mamwe. mari inodarika 100 miriyoni emadhora chete muUnited States mumwedzi mitatu yekutanga ye2021.
Kana ndikarangarira nemazvo, Moto Wemahara wakarova App Store nguva pfupi mushure mePUBG. Kana iwe wakawana mukana wekutamba ese mazita, unogona kuona zvakajeka sei Yemahara Moto ikopi isina kunaka yePUBG, nemifananidzo ine ruzha uye ruzha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Vagadziri vePUBG vanomhan'ara Apple neGoogle nekusabvisa Mahara Moto kubva muzvitoro zvavo